रोटरी क्लव अफ न्युयोर्कले दियो हेवेन्ली पाथलाई १० लाख हेन्ड सेनिटाइजर « Sansar News
रोटरी क्लव अफ न्युयोर्कले दियो हेवेन्ली पाथलाई १० लाख हेन्ड सेनिटाइजर
८ कार्तिक २०७८, सोमबार १०:१३
अमेरिका । रोटरी क्लव अफ न्युर्योक क्वीन्सका अध्यक्ष खेम भट्टको पहलमा पूर्वअध्यक्ष नवरज केसीमार्फत् हेवेन्ली पाथलाई १० लाख थान हेन्ड सेनिटाइजर प्रदान गरिएको छ ।
हेवेन्ली पाथका अध्यक्ष सुकु Rumdali राई र क्लव तथा गोर्खाली समाज न्युोर्कले आयोजना गरेको ब्लड ड्राइभ कार्यक्रममा भट्ट र हामी नेपाली ग्लोवलका प्रथम उपाध्यक्ष समेत रहेका केसीसँग हेन्ड सेनिटाइजर उपलब्ध गराउन गरिएको अनुरोध स्वरुप उक्त हेन्ड सेनिटाइजर उपलब्ध गराइएको बताइएको छ ।
हेवेन्ली पाथले उक्त हेन्ड सेनिटाइजर समय मिलाएर क्वीन्सको ज्याक्सन हाइटमा वितरण गरिने जनाएको छ ।
विगतका दिनमा भट्टको टिमले न्युयोर्कमा रहेका संघ÷संस्थालाई मास्क, हेन्ड सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्दै आएको थियो । साथै आगामी दिनमा पनि आवस्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्दै जाने प्रतिबद्धता भट्टले जनाएका छन् ।
उनले कसैलाई पनि स्वास्थ्य सामग्री आवस्यक परेमा आफुहरु सहयोग गर्न तयार रहेको र त्यसका लागि 40-08 76 st close to Roosevelt Ave DXN Centre मा सातैदिन ३ देखि ९ बजेसम्म सम्पर्क गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।
त्यसैगरी हेवेन्ली पाथका सभापति सुकु Rumdali राईले 40-08 76 st close to Roosevelt Ave DXN Centre र डा. बिनोद साहले सन्चालन गरेको निःशुल्क कोभिड १९ परीक्षण तथा खोप परामर्श केन्द्र संचालन गर्दै Diversity Plaza Jackson Height’s 73-15 37 th Road Ny 11372 मा वितरण गर्ने योजना रहेको हेवेन्ली पाथका सभापति सुकु रुम्दाली राईले जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी वितरणका लागि हेवेन्ली पाथ न्युर्योक च्याप्टरका manju विष्ट र उनको टिमले पहल गर्ने र मास्क सेनिटाइजरको व्यवस्थापनमा डा. विनोद साहले सहयोग गरेका छन् ।